Ezi akụkọ: dobe data? Pịa ... Doh! | Martech Zone
Wednesday, July 9, 2008 Mọnde, Jenụwarị 1, 2018 Douglas Karr
Ihe na - esonụ bụ akụkọ mere eme, akara ụbọchị taa n’ihe dị ka elekere 11:00 nke ụtụtụ mgbe m na - aga nri ehihie. Nke a abughi ebe a na-akwụ ụgwọ, mana agbakwunyela m njikọ buru ibu na ụlọ ọrụ maka ekele ha na-azọpụta m butt!
Development 101 na-ekwu na mgbe ị mebiri koodu gị ma ọ bụ data gị, ị na-ebu ụzọ eme nkwado ndabere. Enweghị mwepu. Nkeji iri na ise o nwere ike iji mee nkwado ndabere ahụ nwere ike ịchekwa gị ọnwa ma ọ bụ ọtụtụ afọ nke ọrụ.
Taa, m mebiri Development 101.
Ka m na-ehichapụ ngwa mgbakwunye, achọpụtara m na enwere ụfọdụ tebụl na-eso ya metụtara ngwa mgbakwunye ahụ. Ahọrọ m tebụl ngwa ngwa wee pịa DROP.
N'ezie, iwu ịdọ aka ná ntị sitere na ihe nchọgharị m mana m, onye nwere ọgụgụ isi, enweelarị mkpịsị aka m n'elu bọtịnụ ntinye na-atụgharị uche na atụmanya. Oge ọzọ mere na nwayọ nwayọ… ka mkpịsị aka ukwu m bidoro njem ala, che ihu na bọtịnụ ahụ, amalitere m ịdọ aka na ntị ịdọ aka na ntị gafee ihe nchọgharị m.
"Ì ji n'aka na ị chọrọ idebe Database mydatabasename?" Pịa.
Amachaghị m ihe kpatara mkpịsị aka m jiri mebie ọgụgụ m na ọgụgụ isi m, mana ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha mere. Naanị m ehichapụ nchekwa data WordPress m.
Ozugbo ahụ, amụrụ m ọnya, ọsụsọ na-agbajikwa m n’egedege ihu. Emepere m ngwa ngwa FTP m ngwa ngwa ma chọpụta ihe nkesa maka ihe fọdụrụ na nchekwa data nke enwere ike ehichapụ. O di nwute, sava weebụ enweghi ahihia ahihia. Ha maara ihe iji soro gị nyochaa ugboro abụọ tupu ị mee ihe nzuzu.
Ibu onye nzuzu.
Dị ka ihe ikpeazụ, abanyere m na ngalaba njikwa m, mepee tiketi nkwado wee dee ihe ndị a:
Naanị m ehichapụ nchekwa data m na sava m. Biko gwa m na ị nwere ụdị nkwado ndabere na mpaghara usoro iji weghachi site na. Nke a bụ ọrụ ndụ m. Sob. Itchdọ Kwaa ákwá.
Ọ dị mma, etinyeghị m ákwá, na-ebe ákwá - ma ị na-agba ịnyịnya ibu gị na nke ahụ bụ ihe m na-eme mgbe m dere tiketi ahụ. N'ime nkeji 2, enwetara m nzaghachi site na email:
Nwere ike nbanye gị Reseller na Akaụntụ na-arịọ a weghachi si Product nhọrọ. Ofgwọ nke iweghachi bụ $ 50.
O doro anya na… M na-aga na ngwaahịa na peeji nke na n'ebe ahụ, na ebube ya nile, bụ akara ngosi na-arịọ a weghachi site na nkwado ndabere na mpaghara. Thedị dị mfe na-ajụ maka ụbọchị ịchọrọ iji wee tinye ozi ọ bụla bara uru. Naanị m na-ede aha nchekwa data ma gwa ha ka ha weghachi ya site na nkwado ndabere kachasị ọhụrụ ha nwere.
N'ime oge 20 saịtị m kwadoro ndabere m na-agbachapụghị 2 posts ọhụrụ. M weghachiri ngwa ngwa na posts ndị ahụ site na email (ebe m denye aha na ndepụta nke aka m) na saịtị m kwadoro 100%. Achọpụtakwara m na 1 okwu (ndo Jason!).
Mụ na onye ọbịa a nọrọ ogologo oge ugbu a. Ugbu a, m na Flywheel na nkwado ndabere na mpaghara abalị bụ akụkụ nke onyinye ha.
Ọ bụrụ na m nwere otu mkpesa, ọ bụ na mgbe tiketi ahụ mechiri, ị nweghị ụzọ isi gwa ha okwu banyere ya. Ọ bụrụ na ị nwere ike itinye okwu na tiketi nkwado emechiri.
Taa ọ gaara ekwu, “I meela!”.
Tags: backupsogwe njikwaweghachite datadobe nchekwa datambadịghachi
Jul 9, 2008 na 9:18 PM
M na ama esịn DBs na mberede na m na-echeghị na- 🙂
Ọ dabara nke ọma, m webhost na-emekwa backups 🙂
Dreamhost n'ezie agbakwunyere ọnwa gara aga ekwenyere m ikike iji weghachite ndabere gị niile n'onwe gị n'efu, nke mara mma, ọ na-ekpuchikwa faịlụ gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Mgbe m tufuru DB mbụ m n’amaghị ama amalitere m ịme ihe m maara na m kwesịrị ime na mbu, na-ebupụ DB na mpaghara mpaghara. N'ụzọ dị ịtụnanya, ejirila m ndị ahụ eme mgbe ị na-eme ihe dara ogbi 🙂
Jul 9, 2008 na 9:22 PM
Anyị maara nke ọma na anyị na-eme oge ụfọdụ anyị na-eme ihe dumbest. Anọla m ebe ahụ ma mee nke ahụ na dịka Alex na-ekwu, m ka ga-eji nkwado ndabere.
Obi ụtọ ị nwere ike iweghachi ya.
Jul 10, 2008 na 4: 11 AM
Obi dị m ụtọ na ị si na ọgba aghara ahụ pụta! Na-ekwu maka blogocide mgbe ị gbanwere url gị, nke ahụ gaara egbu ya!
Agaghị m enwe ohere ọ bụla n'ụdị ihe a, ma na-echekwa oge niile, ọ bụghị naanị mgbe m na-achọ ịgbanwe. M na-eji wp-db-ndabere ngwa mgbakwunye nke na-ezitere m ozi ndabere nke nchekwa data m kwa Mọnde ọ bụla, ọ bụ ezie na ị nwere ike ịhọrọ oge ole ịchọrọ. M ga-akwado nke a maka onye ọ bụla n'ihi kpọmkwem okwu ị kọwara n'elu, kamakwa n'ihe banyere ọ bụla hacking ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ nwere ike ime ka nchekwa data gị ghara ịba uru. Ọ dị mma inwe ike ịkwụ ụgwọ maka iweghachi nnabata nke onye ọbịa gị, mana ọ dị mfe ma dị ọnụ ala karịa ịnwe nkwado ndabere gị mgbe niile.
Emekwala ya ọzọ Doug 😉
Jul 10, 2008 na 11: 45 AM
Mana, oh, lee ka m si hụ n'anya ibi na nsọtụ. 🙂